Dil ka dhacay Mareykanka oo ifbixyey meydad fara badan oo la qariyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dil ka dhacay Mareykanka oo ifbixyey meydad fara badan oo la qariyey
A warsame 21 October 2014 21 October 2014
Mareeg.com: Dalka Mareykanka waxaa fal-dambiyeed dhacay soo ifbixiyey dad kale oo badan oo horay loo dilay, islamarkaana aan laha warqabin.
Dembi baarayaasha baaraya qofka dilay todobo dumar ah oo lagu dilay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Indiana, ayaa sheegay, in qofka sida weyn looga shakisan yahay inuu u sheegay inay suurta gal tahay inuu dilay dad aad u badan 20 kii sano ee la soo dhaafay.
Baarayaasha waxa ay sheegayaan in Darren Vann, oo 43 sano jir ah, inuu qirtay dilka, markii la weydiiyay gabar 19 sano jir ahayd oo lagu dilay albeergo ku taala magaalada Hammond.
Booliska waxa ay sheegayaan in akhbaarta uu ninkaasi bixiyay in ay u fududeysay helidda lix mayd oo kale, kuwaas oo la dilay laguna qariyay maydadkooda guryo cidlo ah oo ku yaalla Waqooyiga galbeed ee gobolka Indiana.
Gaas oo fariistay shir caalami ah oo lagu casumay Soomaaliya
Alshabaab: Waan fashilinay weerarki Axmed Madoobe & milateriga Kenya